जयललितालाई समर्थकले किन मान्थे भगवान् ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
जयललितालाई समर्थकले किन मान्थे भगवान् ?
जिन्दगीका लागि ७५ दिनसम्म संघर्ष गरेपछि ६८ वर्षीया जे जयललिताले सोमवार अन्तिम सास फेरिन् । ६ चोटि तमिलनाडुको मुख्यमन्त्री बनेकी जयललितालाई फोक्सोमा संक्रमण भएको थियो । पछि हृदयघात भएपछि उनको मृत्यु भयो । तमिलनाडुका जनता उनलाई भगवान् मान्छन् ।
उनले गरीबहरूका हितका लागि लिएका धेरै फैसलाका कारण मानिसहरू उनलाई अम्मा भनी बोलाउँथे । जयललिताले आयभन्दा बढी अधिक सम्पत्तिको मामिलामा जेल जाँदा उनका सयौं समर्थकले आत्महत्या समेत गरेका छन् । जयललिताले आफ्नो समर्थकका लागि सस्तोमा सामान किन्ने अम्मा योजना ल्याएकी थिइन् जसले गर्दा उनी देशभरि प्रसिद्ध भइन् । त्यसैकारण उनलाई मानिसहरूले अम्मा भन्न थाले ।
तमिलनाडुका जनताका लागि उनले खाने नूनदेखि लिएर सिनेमाको टिकट समेत सस्तो गराइदिएकी थिइन् । गरीबले राज्यबाट पाउने सबै सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो । जयललिताका यही योजनाहरूका कारण तमिलनाडुका जनता उनलाई देवी मानेर पुज्थे ।